Dhaamsa waayee dhukkuba Corona Oromia Shall be Free |
bilisummaa March 30, 2020	Comments Off on Dhaamsa waayee dhukkuba Corona
Ummata keenna kan baadiyaatiif
1. Gabaa loonii dhiisaa( obsaa). Namni daldala looniitiif dhufu hedduun magaala gurguddoo irraa waan dhufuuf san qofa miti tuttuqqaa biyya alaatis waan qabaachu malaanif
2. Namni midhaan callaa mana qabu duru daassifata ykn akka durii majjeenis ta’uu manatti hororadha.
3. Waan hin bilchaatin keessattu kan magaala bitame dhiisa
3. Nama daakkate mana qabne ollaa irraa liqeeffadha
4. Harka keessan saamunaan tkn daaraa ibiddaa ykn boojjiinis ta’uu dhiqadhaa
4. Qixxee fi jaarsummaa beellamattan yoo qabaattanis dabarsa
5. Booyaa( gadda) fira dhiyoo dirqama dhaqui qabdan yoo hin taane hafaa. Yoo deemtanis walirraa siiqaa.
5. Cidhaa fi milkii biroo yeroo biraatti dabarsaa
6.nama kamuu haa ta’u maaf soddaa hun ta’in hin reebbatinaa
7. Aannan waan elemtuu fi aannan tuqaa qulquleessa
8.yoo dhibeen jabaan.jiraachu baate waan laafaaf gqra mana yaala hun dhufinaa
9. Gabaa dhadhaa hawwooleen dhiisa. Dhadhaa isinuu nyaadha amma akka gaaritti
10.iddirii fi maabaraa fa’as yeroof dabarsaa
Previous Aay ummata Gowwaa…kaan hidhaa kaan sirbisiisu
Next Coronavirus: Sudan deploys troops to secure Ethiopian border
Dr. Gurmeessaa Namoonni kanneen dhukkuba dabalataa qaban dhukkuba COVID-19 kanaaf haala addaan saaxilamoo akka ta’an …